Awoodda Dalxiiska ee dhowaan laga helay Niger Delta ee Nigeria
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Nigeria » Awoodda Dalxiiska ee dhowaan laga helay Niger Delta ee Nigeria
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Caalamka • dhaqanka • Wararka Dowladda • Investments • News • Wararka Nigeria • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Sida laga soo xigtay Xafiiska Maritime -ka Caalamiga ah (IMB), waxaa jiray 135 afduub badeed oo la diiwaangeliyey sannadka 2020 - 130 ka mid ahna waxay ka dhaceen Gacanka Guinea. Sida qabsashadii Mozart, qaar badan oo ka mid ah afduubyadaas waxay raaceen qoraallo khatar ah oo sii kordhaya.
Ka sokow hoggaamiyeyaasha dalxiiska ee maxalliga ah waxay fiirinayaan saxafiyiinta si ay u faafiyaan sawir kale oo soo jiidasho leh oo ka socda gobolkan Nigeria si ay u soo jiitaan dalxiiska.
Niger Delta waa Delta ee webiga Niger oo si toos ah u fadhiya Gacanka Guinea ee ku yaal Badweynta Atlantic ee Nigeria.
Niger Delta ayaa caan ku ah Burcad -badeednimada, burcadda hubaysan, iyo daadinta shidaalka, taasoo ka dhigaysa horumarinta dalxiiska caqabad.
Gudoomiyaha, Ururka Suxufiyiinta Nigeria (NUJ), Golaha Gobolka Bayelsa, Samuel Numonengi si kastaba ha ahaatee wuxuu dareemayaa faafinta Macluumaadka oo liita oo caqabad ku ah horumarinta dalxiiska ee Gobolka Niger Delta.
Socdaalka iyo Dalxiisku waa warshad nabadeed. Tani waxay fursad u noqon kartaa dadka ku nool Niger Delta ee Nigeria inay sii dhisaan. Qof kaftan ah ayaa dadaalkan laga yaabaa inuu ka yimaado Jamaica.
Dunida ma jirto meel ay burcad -badeeddu ku weeraraan in ka badan gacanka Guinea, halkaas oo in ka badan 130 badmaax la afduubtay sannadkii hore.
Cilmi -baaris ay sameeyeen Ururka Ilaalinta Adduunka iyo wakaaladaha dowladda Nigeria ayaa tilmaamaya in celcelis ahaan sanad walba 50 -kii sano ee la soo dhaafay shidaalka ku daatay Nigeria uu la mid ahaa 1989 -kii Exxon Valdez ee ku daatay Alaska.
Dhulkaas ayaa ka khatar badan xeebaha Soomaaliya. Midowga Yurub wuxuu rabaa inuu wax ka qabto.
Waaxda Arrimaha Dibedda ee Mareykanka waxay ka hadlaysaa safarka Nigeria: Dib -u -fiiri safarka Nigeria sababta oo ah dembiyada, argagixisanimo, dagaalo sokeeye, Afduubka, Iyo dembiyada badda. Jimicsigu wuxuu kordhiyay taxaddarka sababta oo ah CVEID-19. Meelaha qaarkood waxay kordhiyeen halista. Akhriso dhammaan La-talinta Safarka.
Daraasad 2018 ah oo ku saabsan Gobolka Niger Delta iyo horumarinta dalxiiska ayaa soo koobaya:
Ujeeddada ugu weyn ee daraasaddan ayaa ahayd in la baaro dhaca badda iyo saamaynta ay ku leedahay horumarinta dalxiiska ee gobolka Niger Delta ee Nigeria.
Furitaankii Xarunta Soo-dhaweynta Dalxiiska Wuxuu sheegay in aragtida dadweynaha ee gobolka ee ku saleysan maqalka ay wax u dhimeyso horumarka dhaqan-dhaqaale ee gobolkan Nigeria, isagoo carrabka ku adkeeyay in la joogo waqtigii ay dadkeennu bilaabi lahaayeen inay sheegaan sheekadooda sheeko si loo saxo marin habaabintii hore ee gobolka.
Gudoomiyaha, Ururka Suxufiyiinta Nigeria (NUJ), Golaha Gobolka Bayelsa, Samuel Numonengi ayaa cambaareeyay faafinta macluumaadka liita oo caqabad ku ah horumarinta dalxiiska ee Gobolka Niger Delta.
Numonengi ayaa ku tilmaamay maqnaanshaha dokumentiyada habboon ee hidaha dhaqanka hodanka ah ee Ijaws -ka inay tahay caqabad weyn oo kor u qaadaysa kartida dalxiiska.
Wuxuu xusay in malaayiin shaqooyin iyo meherado ah ay ku tiirsan yihiin waaxda dalxiiska oo xoog leh. Dalxiisku wuxuu ahaa xoog u kaxeeya ilaalinta hidaha iyo dhaqanka, isaga oo u ilaalinaya jiilalka soo socda inay ku raaxaystaan
Wuxuu yiri Xarumaha Macluumaadka Booqdaha (VICs), oo loo yaqaan “Xarumaha Macluumaadka Dalxiiska ama Xarumaha Soo -dhaweynta, ayaa ugu horreyn loo aasaasay inay siiyaan dadka safarka ah macluumaad waxtar leh si loo hagaajiyo joogitaankooda goobta gaarka ah ee la booqday.
Numonengi wuxuu sheegay in Guddiga Maareynta Xarunta Macluumaadka Booqdaha Ernest Ikoli laga filayo inay siiyaan jawi saaxiibtinimo iyo soo dhaweyn leh booqdayaasha booqanaya gobolka markii ugu horreysay si ay u helaan macluumaad muhiim ah oo ku saabsan badeecadaha iyo adeegyada dalxiiska, iyo sidoo kale inay bixiyaan talo safar ama hagitaan dalxiisayaasha.
Wuxuu sharraxay in xubnaha guddiga maamulka Ernest Ikoli Visitor Information Center oo si taxaddar leh loo xushay laga filayo inay bilaabaan howlaha dhiirrigelinta dalxiiska iyagoo suuq geyn doona badeecadaha iyo adeegyada dalxiiska ee maxalliga ah si ay saameyn toos ah ugu yeeshaan dhaqaalaha maxalliga ah wanaagsanaanta madadaalada ee deganeyaasha iyo booqdayaasha labadaba.
Sida laga soo xigtay Guddoomiyaha Golaha Gobolka, hindisaha ayaa qayb ka ah Golaha Gobolka Bayelsa ee Ururka Suxufiyiinta Nigeria si loo kabo dadaallada horumarinta dhaqan-dhaqaale ee maamulka barwaaqada ee uu hoostago Senator Douye Diri.
Guddiga Maareynta Xarunta Macluumaadka Booqdaha ee Ernest Ikoli ayaa leh guddoomiyaha Qorayaasha Safarka ee Corps of Nigeria Union of Journalists, Golaha Gobolka Bayelsa, Piriye Kiyaramo oo ah Agaasimaha Guud, halka Xoghayaha Golaha Gobolka ee NUJ, Jaalle Ogio Ipigansi uu yahay xoghaye.
Xubnaha kale waxaa ka mid ah: Guddoomiyihii hore ee gobolka ee ururka, Tarinyo Akono, xoghayihii hore ee gobolka, C Stanley Imgbi, Iskuduwaha òf International Institute of Journalism (IIJ), Xarunta Daraasaadka Yenagoa, Roland Elekele iyo Maareeyaha Ganacsiga ee Silverbird FM Oxbow Lake Swali-Yenagoa, Oyins Egrebindo
Waxa kale oo la magacaabay Maareeyaha Guud ee Dadweynaha FM, Oxbow-Lake, Lawson Heyford, Maareeyaha Guud ee Royal FM, Agudama, Tudor Ayah, Ku-simaha Maareeyaha Guud ee Shirkadda Bayelsa Broadcasting Corporation, Terence Ekiseh, Mr. Tonye Yemoleigha (Radio Bayelsa), Mr. Fiezibe Osain (Wasaaradda Warfaafinta), Mr. Agidee Theophilus (Telefishinka Madaxa Bannaan ee Afrika), Tifaftiraha Mawjadaha Cusub, Peace Sinclair, Ex-officio-ga Qaranka ee NAWOJ, Beatrice Sikpi iyo Ku-xigeenkii hore ee Aagga ee Ururka Qaranka Suxufiyiinta Haweenka. (NAWOJ), Marwo Timi Idoko.
Isagoo ka jawaabaya, Agaasimaha Guud ee Xarunta Macluumaadka Booqdaha Ernest Ikoli, Jaalle Piriye Kiyaramo, oo isaguna labanlaab ah guddoomiye, Qorayaasha Safarka ee NUJ, ayaa u mahadceliyay hoggaanka golaha gobolka ee helay isaga iyo xubnaha kale ee mudan in loo adeego, sida uu ballanqaaday inay ka soo dhalaali doonaan hawshii loo idmaday.
Waxaa la xusuusan doonaa in xarunta macluumaadka booqdaha ee loo socdo, oo mararka qaarkood loogu yeero “Xarunta Soo-dhaweynta” ay bixiso goob-joogsi, goob jireed oo socotadu ku xiriiri karaan meheradaha iyo adeegyada maxalliga ah.
Intaa waxaa dheer, xarunta macluumaadka booqdaha waxaa laga filayaa inay bixiso meel ay dakhli ka soo saarto iyada oo iibinaysa badeecadaha iyo farsamada gacanta ee maxalliga ah iyo sidoo kale qabashada iyo falanqaynta macluumaadka socdaalka iyo tirakoobka muhiimka u ah ujeeddooyinka qorshaynta.
Bil ka hor Wasiirka Dalxiiska ee Jamaica ahna Isuduwaha Xarunta Adkeysiga Dalxiiska Caalamiga ah iyo Xarunta Maareynta Dhibaatooyinka (GTRCMC), Edmund Bartlett, ayaa ku dhawaaqay in hadda ay socdaan wada-xaajoodyo lagu dhisayo xarunta dayax-gacmeedka GTRCMC ee Nigeria. Waxaa laga yaabaa inay tani tahay tallaabo wanaagsan oo ugu horreysa oo lagu bilaabayo safarka iyo dalxiiska mid ka mid ah gobolka ugu xooggan uguna muhiimsan Afrika.
The AfriGuddiga Dalxiiska ma soo dhaweyn karaan hindisahan Nigeria waxayna diyaar u yihiin inay caawiyaan marka la waydiiyo.